China Kenter Type njikọ njikọ ụlọ ọrụ na ndị na -eweta ya Chigong
Kenter Ụdị njikọ
Ezubere ụdị njikọta AID Kenter ma mee ya na DIN 22258-2, yana igwe nchara dị elu iji zute akụrụngwa igwe zuru oke.
A na -eji ụdị njikọ Kenter maka ijikọ agbụ njikọ DIN 22252 na agbụ njikọ DIN 22255 na kwụ ọtọ naanị.
njikọ njikọ njikọta igwe nchara, njikọ njikọta njikọta njikọta njikọta, DIN 22252 yinye Ngwuputa, DIN 22258-2 ụdị ndị na-ahụ maka ụdị onye na-ahụ maka igwe, eriri igwe na-ebu ihe na-ebugharị, sistemụ sistemụ ụgbọ elu.
Ndị na -ebugharị ihu Armored (AFC), Ndị na -ebugharị ihe nkiri Beam (BSL), na -egwu ala
Mgbakọ nke ụdị njikọ Kenter dị ka egosipụtara n'elu.
Dị ka ngwa dị mkpa nke ihe nchapu na onye na -ewepụta slag na ebe a na -egwupụta coal, njikọ ya nwere nnukwu ikike ịgba ọkụ cyclic na ọnụego itinye ya n'ọrụ; N'ịrụ ọrụ, ọ na -enwe ike ndọda, esemokwu na yinye, ngọngọ na sprocket, mmiri ịnweta mmiri na -emebi ya.
Ndị na -ejikọ njikọ njikọta nke AID nwere nha jiometrị nwere ezi uche, site na igwe siri ike, ọkara imecha, imecha, ọgwụgwọ ọkụ, ịgbatị oge, ọgbụgba ọkụ na usoro ndị ọzọ, nwere ike dị elu, ike siri ike, na -eyi nguzogide, nguzogide corrosion, ike ịgba oyi nke ọma, ike na -emebi emebi na ihe ndị ọzọ eji arụ ọrụ.
Ọgụgụ 1: Kenter Ụdị njikọ
Ntọala 1: Akụkụ njikọta Kenter na akụrụngwa ya
Nkeji ike na -agbaji (MBF)
Iguzogide ike ọgwụgwụ maka DIN 22258
ndetu: nha ndị ọzọ dị mgbe a jụrụ.
ike ọrụ bụ 63% nke MBF.
ike nnwale bụ 75% nke MBF.
Nke gara aga: Ewepụghị Type njikọ (SP)
Osote: Block Ụdị njikọ
ngwa njikọ arịlịka
njikọ njikọ arịlịka
njikọ njikọ njikọta
njikọ njikọ g80
g80 njikọ njikọ
Block Ụdị njikọ
Ewepụghị Type njikọ (SP)
Ewepụghị Type njikọ (SL)